Typicalfọdụ na-ahụkarị ihe ụtọ na drọsta Moroccan | Njem zuru oke
Isabel | 16/04/2021 10:55 | Emelitere ka 16/04/2021 11:55 | Morocco
Otu akụkụ nke kacha gosipụta ọdịbendị nke obodo bụ gastronomy ya. Otu nke si na Morocco nwere nnukwu akụnụba na ọtụtụ efere n'ihi ọtụtụ mgbanwe ọdịnala nke mba ahụ na ndị ọzọ nweela n'akụkọ ihe mere eme dị ka ndị Berber, ndị Arab ma ọ bụ ọdịbendị Mediterenian.
Ya mere, ọ bụ gastronomy a nụchara anụcha ma dị mfe n'otu oge ahụ, ebe ngwakọta nke ụtọ na nnu dị ụtọ yana ojiji nke ngwa nri na oge dị iche.
Ma ọ bụrụ na a maara gastronomy Moroccan maka ihe, ọ bụ maka ọmarịcha ihe ọessụ .ụ ya. Y’oburu n’inwe obi uto n’isi isi nri ma nwee onu di uto, echezola ihe ndia n’ile ebe anyi nyochaa ihe uto kacha nma na Morocco.
1 Kedụ ihe eji eme achịcha Moroccan?
2 Top 10 ihe ụtọ dị na Moroccan
2.3 Mpi Gazelle
2.5 Ndi anwuru
Kedụ ihe eji eme achịcha Moroccan?
A na-eme swiiti Moroccan tumadi site na ntụ ọka, semolina, akụ, mmanụ a honeyụ, cinnamon na shuga. Ngwakọta nke ihe ndị a emeela ka usoro ntụziaka ndị ama ama gbasaa ngwa ngwa gburugburu ụwa.
N'ime akwukwo nri di iche na Moroccan ato uto, otutu nri di ma ma oburu na igbalitaghi ihe ha puru iche, igaghi echefu ihe nri ndia.
Top 10 ihe ụtọ dị na Moroccan
Otu n'ime desserts nke kpakpando nke Middle East nri gafere oke. Mbido ya dị na Turkey, mana ka ọ na-agbasa n'ụwa nile, ụdị dị iche iche apụtala na-etinye ụdị mkpụrụ dị iche iche.
A na-eji bọta, tahini, pawuda sinam, shuga, walnuts na phyllo mgwakota agwa eme ya. Nzọụkwụ ikpeazụ mgbe isi nri bụ ịsa ya na mmanụ a honeyụ iji nweta ihe eji megharịa ọnụ nke nwere ezigbo ụtọ ụtọ mara mma jikọtara ya na ahịhịa crunchy nke a na-enweta site na iji mkpụrụ na filo achịcha.
Ntụziaka dị mfe ma ị nwere ike ịkwadebe ya n'ụlọ. Iji jeere ya ozi, a ga-egbutu ya na obere akụkụ n’ihi na ọ bụ ihe eji megharịa ọnụ. Ọ bụ ezie na ọ naghị esite na Maghreb, ọ bụ otu n'ime ụtọ na-atọkarị ụtọ na Morocco.
Foto | Wikipedia nke Indiana Younes
Otu n'ime ihe ụtọ na-atọ ụtọ nke Moroccan, karịsịa n'etiti ụmụaka, bụ Seffa. Ọ bụ ụdị efere a hụrụ n'anya na mba ahụ nke nwere ụdị nnu na ụtọ ya. A na-eme ya n'oge ụbọchị pụrụ iche, na nnọkọ ezinụlọ, mgbe a mụrụ nwatakịrị ma ọ bụ ọbụlagodi na agbamakwụkwọ.
Na mgbakwunye, ọ dị nnọọ mfe ịkwadebe ka ọ ghara ịchọ itinye oge dị ukwuu na kichin. Ọbụna enwere ike iri ya dị ka nri ụtụtụ dịka efere a jupụtara n'ọtụtụ carbohydrates dị mgbagwoju anya nke na-ewepụta ume na-adịte aka, nke na-enye ihe niile ịchọrọ iji chee ogologo ụbọchị ọrụ.
Iji kwadebe ụdị Seffa dị ụtọ, naanị ihe ị chọrọ bụ obere couscous ma ọ bụ osikapa noodles, bọta, mkpụrụ almọnd sliced, shuga shuga na pawuda. Mana, enwerekwa ndị na-agbakwunye ụbọchị, lemon peel, chocolate, pistachios ma ọ bụ oroma candied n'ihi na ọ bụ efere enwere ike ịmegharị maka ụtọ nke ezinụlọ site na ịgbakwunye ihe ndị ọzọ.
Seffa bụ otu n'ime ihe ụtọ ụtọ Moroccan kachasị mma ebe ọ bụ na couscous nwere ọtụtụ eriri, ezigbo maka ịsacha ahụ. Na mgbakwunye, almọnd nwere nnukwu calcium. Na nkenke, otu akụkụ Seffa bụ nhọrọ a tụrụ aro ka ọ gbanye batrị gị n'ụzọ dị mma ma dịkwa ụtọ.
Foto | Okdiario
Ọzọ nke kachasị na-atọ ụtọ Moroccan bụ kabalgazal ma ọ bụ mpi mgbada, ofdị nke ihe na-esi ísì ụtọ nke jupụtara na almọnd na ngwa nri nke ọdịdị ya na-echetara mpi anụmanụ a na mba Arab na-emetụta ịma mma na ịdị mma.
Ihe eji eme uto a bu ihe ndi mara nma n’ime Moroccan ma ya na tii na eso ya n’oge puru iche.
Nkwadebe ya adịchaghị mgbagwoju anya. Akwa, ntụ ọka, bọta, pawuda, shuga, ihe ọ juiceụ juiceụ na peepe mmanụ na-eji maka mgwakota agwa. N'aka nke ọzọ, a na-eji almọnd n'ala na mmiri ifuru oroma maka mado n'ime mpi mgbada.
Foto | Nri Maroquin
Mara dika «Moroccan churro», Sfenj bụ otu n'ime ụdị ihe ụtọ Moroccan kachasị mma, nke ị nwere ike ịchọta n'ọtụtụ ụlọ n'okporo ámá n'obodo ọ bụla na mba ahụ.
N'ihi ọdịdị ya, ọ na-adị ka donut ma ọ bụ donut ma jiri mmanụ a honeyụ ma ọ bụ shuga ntụ mee ya. Ndị Moroccan na-ewere ya dị ka ihe atụ, ọkachasị n'etiti etiti ụtụtụ tinyere tii na-atọ ụtọ.
Ihe eji eme sfenj bụ yist, nnu, ntụ ọka, shuga, mmiri ọkụ, mmanụ na shuga na-awụsa n’elu iji chọọ mma.
Ọzọ n’ime nri kachasị atọ ụtọ nke nri Alahuita bụ briwats, obere nri achịcha achịcha nwere ike jupụta pasta nnu nnu (tuna, ọkụkọ, atụrụ) na ihe ụtọ ma na-enyekarị ya na oriri na oriri.
N'ime nsụgharị ya, briwats bụ otu n'ime ihe ndị na-atọ ụtọ na Moroccan. Ọ bụ obere achicha dị ka triangle ya na mgwakota agwa ya dị mfe ịkwadebe. Banyere ndochi ahụ, maka ịkwadebe ya ifuru ifuru mmiri, mmanụ a honeyụ, pawuda, almọnd, bọta na pawuda. A obi ụtọ!
Ọzọ nke ndị na-atọ ụtọ na Moroccan na-atọ ụtọ bụ trid, nke a makwaara dị ka "achicha nke ogbenye." A na-ewerekarị ya na nri ụtụtụ tinyere otu iko tii ma ọ bụ kọfị. Dị mfe ma kemmiri ihe.
N'ihi ike nri ha dị elu, chebakias bụ otu n'ime ihe ụtọ Moroccan kachasị ewu ewu iji gbasaa ngwa ngwa na Ramadan. Ha na-amasị ha nke ukwuu nke na ọ bụ ihe a na-ahụkarị ịchọta ha n'ahịa ọ bụla ma ọ bụ ụlọ ahịa achịcha dị iche iche na mba ahụ ma ụzọ kachasị mma isi detụ ha ụtọ bụ kọfị ma ọ bụ tii mint.
A na-eji ntụ ọka ntụ ọka ọka emebere ha iji ghee ma jee ozi na ibe. Mmetụta mbụ nke chebakias na-enye site na ngwa nri etinyere ya, dị ka saffron, oroma ifuru kachasi mkpa, cinnamon ma ọ bụ ala anise. N'ikpeazụ, a na-eji mmanụ a honeyụ mee ihe eji megharịa ọnụ a ma jiri mkpụrụ osisi sesame ma ọ bụ sesame gbaa ya. Ihe obi uto nye ndi huru uto n'anya ya na ezigbo ekpomeekpo.
Foto | Ezigbo
Nke a bụ otu n’ime ihe ndị na-enweghị oke igbochi cheiz nke Moroccan. Crispy na mpụta na kemmiri dị n'ime, nke a bụ ihe ọ Middleụ Middleụ Middle East dị ụtọ nke ejiri ntutu isi mmụọ ozi mee, butter butter na akawi cheese n'ime.
Ozugbo esi nri, kanafeh na-eji sirop na-esi ísì ụtọ na-acha uhie uhie ma fesa ya na walnuts, almọnd ma ọ bụ pistachios. Nri ụtọ a na-atọ ụtọ ụtọ bụ ezigbo ọgwụgwọ ma ga-ebuga gị na Middle East site na nri mbụ. A na-ewere ya karịsịa na ezumike nke Ramadan.
Foto | Wikipedia nke Mourad Ben Abdallah
Ọ bụ ezie na mmalite ya dị na Algeria, makrud abụrụla otu n'ime ihe ndị na-atọ ụtọ na Moroccan kachasị ewu ewu ma ọ bụ ihe a na-ahụkarị na Tetouan na Oujda.
Ihe ejiri mara ya bu inwe ola diamond ma jiri ya mee mgwakota agwa ya site na wheat semolina, nke emere eghe mgbe o juputara na nkpuru osisi, fig ma obu nkpuru osisi almọnd. A na-enye aka ikpeazụ site na ịsa ahụ makrud na mmanụ a honeyụ na mmanụ ifuru mmiri. Na-atọ ụtọ!
Foto | Nka
Ọzọ nke sweets nke Moroccan nke a na-eje ozi na ụdị dị iche iche bụ feqqas. Ha bụ kuki esiri esi na ntụ ọka, yist, àkwá, almọnd, oroma ifuru mmiri na shuga. Enwere ike iri ha naanị ma ọ bụ site na ịtinye mịrị, ahụekere, anise ma ọ bụ mkpụrụ sesame na mgwakota agwa.
A na-ahụ feqqas site na ekpomeekpo ha dị nro dabara adaba maka palates niile. Na Fez ọ bụ ọdịnala ijere ụmụ feqqas ozi na nnukwu efere nke mmiri ara ehi dị ka nri ụtụtụ maka ụmụaka. Maka ndị okenye, ihe enyemaka kachasị mma bụ mint mint na-ekpo ọkụ. Gaghị enwe ike ịnwale naanị otu!
Pathzọ zuru ezu na edemede: Njem zuru oke » Ahụkarị Moroccan na ato uto
Cuba na mmalite aha ya